प्रदूषणसँग मिल्दछन्, जसमध्ये आठ एशियामा बग्दछन्।
प्लास्टिकको साथ पानीको फोहोरको विषय यहाँ देखा पर्‍यो। एक अवसरमा त्यहाँ एउटा टिप्पणी थियो कि यस फोहोरको अत्यधिक बहुमत समुद्रको अन्तमा या the्गजेको नेतृत्वमा विश्वका पाँचवटा नदीहरू बीचमा समाप्त हुन्छ। अवश्य पनि, परेटो सिद्धान्त धनुष, र दक्षिणपूर्व एशिया बाहिरका गतिविधिहरू कम महत्त्वका छन् भन्ने दाबी गर्दछन्। यी आधारहीन टिप्पणीहरू थिएनन्, त्यस्ता अध्ययनहरू वास्तवमै छन् - वा बरु मोडलहरू। ती मध्ये एक (लेब्रेटन एट अल।, २०१)) मानिन्छ कि २० नदीहरू percent 67 प्रतिशतका लागि जिम्मेवार छन्। त्यस्ता प्रदूषणहरू, र उनीहरूको यांग्त्जी नदी पछि, गंगा पछि, पर्ल नदी (क्सीबाट), हुआ Hu्पु, आदि। अमेजन, मेकोong र नाइजेरियन क्रस पनि यसको नेतृत्वमा छन्। समान निष्कर्षहरू अर्को विश्लेषणबाट निकाल्न सकिन्छ (श्मिट एट अल।, २०१ 2017) - यसको प्रकाशमा, करीव 90 ० प्रतिशतको लागि पनि। केवल दस नदीहरू प्रदूषणसँग मिल्दछन्, जसमध्ये आठ एशियामा बग्दछन्। यो परेटोको अनुपातसँग पनि सहमत छैन। यदि हामी मान्दछौं कि दस नदीहरु लाई जादुई २० प्रतिशत छ। (यद्यपि यो प्रभाव 80०% हुन दस भन्दा पनि कम हुनुपर्दछ), यसले विश्वमा into० नदीहरू समुद
यसबाहेक, यो युगहरु को लागी तह गरिएको छैन। चाखलाग्दो कुरा, माथिका बुद्धिका धेरैजसो प्रचारकहरूलाई शपथले के भनिरहेको छ थाहा छैन।
पोल्याण्डमा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी इन्टरनेट छलफलमा यसका कर्मचारीहरुप्रति क्रोध, पश्चाताप र अवहेलनाको बीचमा बारम्बार तर्क दोहोर्‍याइन्छ: हिप्पोक्रेटिक शपथबारे के भनियो? यो यस्तो प्रकारले जान्छ: यदि तिनीहरूले हिप्पोक्रेटिक शपथ लिन्छन् भने उनीहरूलाई अब मर्न दिनुहोस्। क्रोध र ईश्वरनिन्दा काउन्टर-तर्कको जवाफमा देखा पर्दछ कि ... आखिर, आज कसैले पनि त्यस्तो शपथ लिदैन। यसबाहेक, यो युगहरु को लागी तह गरिएको छैन। चाखलाग्दो कुरा, माथिका बुद्धिका धेरैजसो प्रचारकहरूलाई शपथले के भनिरहेको छ थाहा छैन। हामी उनलाई हेरौं। र नोट: मूल पुरानो ग्रीकमा लेखिएको छ। त्यहाँ धेरै अनुवादहरू छन् जुन राम्रोसँग मिल्दैन। म मुख्यतया मेडिकल नैतिकता मा ब्रजेझीस्कीको पाठ्यपुस्तकमा प्रदान गरिएको पाठ प्रयोग गर्दछु। र त्यसैले: म अपोलो, एस्कुलपियस, हाइगिया र पानाकिया, सबै देवीदेवताहरूको कसम खान्छु र म तिनीहरूलाई साक्षीको रूपमा ग्रहण गर्दछु, किनकि मैले यो शपथ मेरो शक्तिमा राख्छु। पहिलो स्क्रिच। के अपोलो, के Hygieja र Panakieja? यो शपथ पुरानो ग्रीसमा लेखिएको थियो (सा.यु.पू. and र centuries औं शताब्दीको सुरुमा जीवित कल्पना गर्दै